५० प्रतिशत घरभाडा मिनाहा, भाडा नदिएको भन्दै किचकिच गरे कारबाही – Sandesh Press
May 27, 2021 260
काठमाडौ । कोरोना संकटका बेला निम्न आय भएका डेरावालहरुलाई बन्दाबन्दी अवधिभर ५० प्रतिशत घरबहाल मिनाहा गर्न माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा महासंघका अध्यक्षले खनालले भनेका छन्–‘बहाल नदिएको निहुँ झिकी घरबाट निकाल्ने, जवरजस्ती बहाल बुझाउन बाध्य पार्ने, बहाल बृद्धि गर्ने, सुविधा बन्द गर्ने, पेश्की रकम माग गर्ने, जबरजस्त बन्द गर्न बाध्य पार्ने जस्ता विवेकहीन र मानवीय संवेदनहीनतको कार्यहरु सिमित घरधनीबाट भएकोले सो प्रति महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
साथै राष्ट्रिय घरजग्गा बहाल क्षेत्र संरक्षण कानुन बनाउन, वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ ।
Prevआज कहाँ-कहाँ हुदैछ भारी बर्षा र हिमपात ?
Nextडाक्टरकाे सल्लाह बिना आफैं औषधि किनेर खाँदा यति ठूलाे क्ष`ति ! रहेन जिन्दगी!